Super Bowl မှာ ဖျော်ဖြေဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးမှ ချလိုက်ရတာပါလို့ Adam Levine မှပြောကြား။ – SoShwe
Home/Entertainment/Super Bowl မှာ ဖျော်ဖြေဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးမှ ချလိုက်ရတာပါလို့ Adam Levine မှပြောကြား။
UNIVERSAL CITY, CA - APRIL 23: Adam Levine attends NBC's 'The Voice' Season 14 taping on April 23, 2018 in Universal City, California. (Photo by Tara Ziemba/Getty Images for NBC)
Super Bowl မှာ ဖျော်ဖြေဖို့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တော်တော်လေးစဉ်းစားပြီးမှ ချလိုက်ရတာပါလို့ Adam Levine မှပြောကြား။
2019 super bowl ရှိုးမှာ ဖျော်ဖြေဖို့အတွက် သူရဲ့ Maroon5အဖွဲ့နဲ့အတူ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တာဟာ လွယ်တဲ့ ကိစ္စတော့မဟုတ်ပါဘူး။
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေက ဒီဖျော်ဖြေပွဲမှာ ဝင်ရောက်ဖျော်ဖြေခွင့်ရတယ်ဆိုတာ ပရိသတ်တော်တော်များများရဲ့ ဂုဏ်ပြုခြင်းကို ခံရတဲ့ ချီးကျူးမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ ရဲတွေရဲ့ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်မှုနဲ့ မသမာမှုတွေရန်ကို ကာကွယ်တားဆီးဖို့ Colin Kaepernick နဲ့ NFL က အခြားဘောလုံးသမားတွေရဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေက အပြစ်တင်ဝေဖန်ခြင်းများကို အတော်ခံရတဲ့ ပွဲဖြစ်ပါတယ်။
Maroon5ရဲ့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Adam Levine ကတော့ဒီလိုပြောကြားပါတယ်။
” နောက်နှစ်ဆယ်ရာစုအထိ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဖြစ်တည်မှုကို သိနေမယ်ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့တင် ကျေနပ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က ဟောပြောသူတစ်ယောက်မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ကျွန်တော် သီချင်းတွေကတစ်ဆင့် ဟောကြားပါတယ်။ ကျွန်တော့် အလုပ်နဲ့ ကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တဲ့အရာတွေဟာ အကောင်းဖက်ကိုပဲ ရောက်စေချင်ပြီး ကောင်းတာတွေကို အတုယူစေချင်ပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့အခုလုပ်နေတဲ့ အလုပ်ကို အကောင်းဆုံး ရှေ့ဆက်လုပ်သွားပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့ သီချင်းတွေနဲ့ပဲ ထုတ်ဖော်ပြောသွားမှာပါ . . . ”
ဆက်လက်ပြီး သူကပဲ ” ဘယ်လောက်တောင်ကောင်းလိုက်တဲ့ လက်နက်တစ်ခုလဲ ကျွန်တော်ရော ကျွန်တော့ရဲ့ အဖွဲ့ကရော ဒီနှစ်မှာဘယ်လို အသစ်တွေလာမလဲ ? ကျွန်တော်တို့ ပရိတ်သတ်တွေကို ဘာတွေချပြရမလဲဆိုတာ ထုတ်ဖော်ပြသခွင့်ရှိတယ်။ အခုလုပ်ပြီးသွားတဲ့ အရာတွေအတွက် တော်တော်လေး အားရကျေနပ်မှုရှိတယ်။ ဒီအရာက ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်လို့ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ တစ်ခါမှ ဒီလောက်ထိ စိတ်မလှုပ်ရှားဖူးဘူး . . . ” ထပ်မံ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
NFL ရဲ့ သတင်းကြေငြာသူတစ်ယောက်ကတော့ “Maroon5က ဒီ Pepsi Super Bowl ရှိုးပွဲအတွက် တော်တော်လေးအားထုတ်ထားတယ်။ ဒီရှိုးမှာ ထူးခြားလေးနက်တဲ့ အစီအစဉ်တွေ အများကြီးကို တွေ့ရမှာပါ။ ဂီတအနုပညာရှင်တွေ ပညာအစွမ်းကုန်ပြမယ့် ပွဲကောင်းတစ်ပွဲလည်းဖြစ်ပါတယ်” လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ကို ဒီလိုအခွင့်အရေးကောင်းတွေပေးခဲ့လို့ NFL ကို အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ ကလေးငယ်များစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အထောက်အကူပေးတဲ့ Big Brothers Big Sisters အဖွဲ့ကို လှူဒါန်းမယ့် ကိစ္စရပ်အတွက် တော်တော်ပီတိဖြစ်မိပါတယ်။
Maroon5ရဲ့ ၂၀၁၉ Super Bowl LIII Pepsi Halftime show ကတော့ Feb ၃ ရက်နေ့မှာ CBS က ထုတ်လွှင့်ပြသမှာဖြစ်ပါတယ်။
Previous Christina Aguilera မှ Pink အား ရိုက်နှက်ရန် ကြိုးစား။
Next Jessica Biel ?? ?????????????? Justin Timberlake ?????????? ???????????? ???????